Kooxda Barcelona oo kalsooni ku qabta saxiixa xiddiga Man United ee Marcus Rashford – Gool FM
(Barcelona) 27 Abriil 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay kalsooni ku qabto inay la soo wareegto weeraryahanka Manchester United ee Marcus Rashford.
Xiddiga xulka qaranka England ayaa horumar wacan sameynaya waxaana uu ka mid noqday ciyaartoyda furaha u ah kooxda ka dhisan garoonka Old Trafford, laakiin mustaqbalka weeraryahankan ee naadiga ayaa shaki la galiyey.
Wada-xaajoodka uu xiddigan heshiis cusub ugu saxiixayo kooxda Manchester United ayaa weli socda, laakiin Jariiradda The Sun ayaa warinaysa in Barcelona ay diyaar u tahay inay burburiso wahadalladaas.
Rashford ayaa heshiiskiisa kooxda Man United waxa uu ku eg yahay dhammaadka xilli ciyaareedka 2020-21, laakiin kooxda ka dhisan horyaalka Premier League ayay u badan tahay inaysan ogolaan doonin inuu xiddigan beeca xorta ah kaga tago.
Barcelona ayaa la sheegayaa inay diyaarisay adduun lagu qiyaasayo 100 milyan oo gini si ay u hubiso inay soo qaadato bedelka waqtiga dheer ee Weeraryahankeeda Luis Suarez.
21-sano jirkaan ayaa dhaliyey 13 gool 44 kulan oo uu ciyaaray tartammada oo dhan xilli ciyaareedka.
Premier League oo Man City iyo Liverpool u kala geynaya Labo Koob iyo Bilado....(Sidee!!!??)